Wonke umntu ukuthiyile intengiso ... Ngaba intengiso ehlawulelweyo isasebenza? | Martech Zone
Kukho itoni yeencoko ezikwi-Intanethi malunga nokupheliswa kwentengiso. I-Twitter ayiphumelelanga kakhulu kwiphakheji yayo yentengiso. I-Facebook iyaphumelela, kodwa abathengi bayakhathala ziintengiso ezisasazwe kuyo yonke indawo. Kwaye ukukhangela okuhlawulelweyo kuyaqhubeka nokuqhuba ingeniso engakholelekiyo ... kodwa ukukhangela kuyehla njengezinye iindlela zokufuna kunye nokufumana ulwazi kwi-intanethi lukhula ekuthandeni.
Ewe, ukuba ubuza kubathengi (kunye neNgcebiso ngeTekhnoloji kunye ne-Unbounce), unokucinga ukuba abanamsebenzi:
I-38% yabaphenduli bathe sukuhoya kwiintengiso ezikwi-intanethi.
I-79% yabaphenduli bathe baphantse ungaze ucofe iintengiso ezikwi-Intanethi.
I-71% yabaphenduli bathe iintengiso ezenzelwe wena kunye nokuziphatha Ziyaphazamisa okanye ziyacaphukisa.
I-90% yabaphenduli bathe zange bayenza i ukuzibophelela kokuthenga emva kokucofa kwintengiso.
Ewe, ukuqonda kwabantu xa bebuzwa kunokuba kwahlukile kwiziphumo ozifumanayo. Ukuba ucinga ukuba iintengiso ziyafa okanye ufuna ukuba zihambe, linda ude uqale ukubetha iindonga zentengiso kunye nomxholo oxhasiweyo kuyo yonke indawo. Ndingathanda ke ukuba ndicacise, ndibhengeze intengiso efanelekileyo kunokuba ndenze intengiso ngobuqhophololo!
Imithombo yeendaba ehlawulwa kwi-Intanethi inegama elidibeneyo. Amashishini amaninzi ayithatha njengeyona nto iphambili kwicebo labo lokuthengisa, kodwa baninzi abagxeki. Ukuba ukhangela iwebhu, uya kufumana amakhulu amanqaku abonisa ezona ndlela zilungileyo zokufumana ukucofa kunye nokuguqula, kunye namakhulu ngakumbi ekuchazeni ubuqhetseba bokuthengisa okuphazamisayo.
Ngaba ukuthengisa kwi-Intanethi kuyasebenza?
Eyona nto iphambili kukuba ukusebenza kwamaphulo akho kunokuphuculwa ngokuhamba kwexesha kunye neengcebiso apha kule infographic. Nangona kunjalo, umgca wezantsi umba we-ROI. Nokuba kunenqanaba elincinci lokucofa kunye nenqanaba lokuguqula, ngaba isicwangciso sisenenzuzo? Ngaphandle kwamathandabuzo uyakufuna i-omnichannel kunye ne-inbound iqhinga lokunyusa ivolumu ekhokelayo kunye nokunciphisa iindleko ngokunqakraza; Nangona kunjalo, iintengiso zodwa zinokusebenza ngendlela emangalisayo. Umntu othile ucofa kubo, akunjalo?
Khuphela ingxelo epheleleyo kwi-TechnologyAdvice kunye ne-Unbounce, U kufunda: Ngaba iMithombo yeendaba ehlawulelweyo kwi-Intanethi isasebenza ngo-2015? ukufunda apho imithombo yeendaba ekwi-intanethi inegumbi lokuphucula kunye nendlela yokwenza intengiso yakho yedijithali yokuzibandakanya kunye nokuguqula.
tags: bonisa iintengisoiintengiso ezihlawulwayointengiso yentlalo ehlawulelweyohlawula ngokucofa intengisointengiso ye-ppcIngcebiso ngeTekhnolojia ngafuni
Ukuphinda uyile i-imeyile: Iimpawu ezi-6 ezifuna ukucinga kwakhona
IiNkqubo zeSelfowuni: Kubaluleke kangakanani ukuCwangcisa, ukuKhusela kunye nokuVavanya?